Beyond Conversations MeetUp • Brand You Academy
Brand You Academy ကနေ အပါတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ ည (၇ : ၀၀)မှာ ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Community MeetUp မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို အားလုံးအတွက် Notes အနေနဲ့ ပြန်ပြီး တင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ခြင်းစီ အသစ်လေးတွေကို ဒီ post လေးရဲ့ အောက်မှာပဲ ဆက်ပြီးတင်ပေးသွားပါမယ်။
Facilitators: Dr. Phio Thiha, Htet Yie, Dr. Nang Nay Nwe
————————- Conversation : 14 —————————————
ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ emotion ကို နာမည်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ( Doubt? Worrry? Anxiety? စသည်ဖြင့်)
Negative လား၊Positive လား၊ ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ၊ ဘာကို ဖြစ်တာလဲ၊ ဘယ်သူ့ကိုဖြစ်တာလဲ စသည်ဖြင့် စဉ်းစားကြည့်ပါ။
၂၂ ကနေ ၁ ကိုချက်ခြင်း ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ တစ်ဆင့်ခြင်းစီ တက်သွားရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ကိုယ်က ဘယ်နားမှာ အများဆုံးရှိနေတတ်လဲ သတိထားပြီးကြည့်ကြည့်ပါ။
Relationship တွေမှာ ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းဖို့
မိသားစုလား၊ လုပ်ငန်းခွင်လား၊ Business Partner လား ဘယ်လိုမျိုး relationship လဲ? ပုံစံတွေက မတူတတ်ကြပါဘူး။
Common Goal ကို ဦးတည်ပြီးပြောရင် ပိုပြီးထိရောက်တတ်ပါတယ်။
စကားပြောတဲ့အခါ ဦးနှောက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံက စစချင်းပြောတဲ့စကား နဲ့ နောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားကို ပိုမှတ်မိတတ်ပါတယ်။
Sandwich Feedback > အကောင်း – အဆိုး – အကောင်း ပုံစံကို သုံးသင့်ပါတယ်။
————————- Conversation : 1 —————————————
Issues to Solve 🎯ဖြေရှင်းဖို့လိုနေတာ၊ တိုးတက်ချင်တဲ့နေရာ🎯
Motivation လျော့ပြီး၊ Focus မရှိတာ၊ အလုပ်တွေ မပြီးဘူးဖြစ်နေတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ commitment ကိုပြန်ရှာပါ။ သာမာန် energy နဲ့ ပြီးပြီးရောနေတာ မဟုတ်ဘဲ Generating Power ရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။
🆕 တစ်ရက်ချင်းစီမှာ ကိုယ့်အတွက် Context ကိုရွေးချယ်ပြီး နေပါ။
🆕 ကိုယ့်ရဲ့ Commitment ကို ပြန်ရှာပြီး အချိန်တိုင်းမှာ Recreate လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
🆕 “ငါ့အတွက်”ဆိုတာထက် ပိုတဲ့ context ကို ဖန်တီးပြီး Expand လုပ်ကြည့်ပါ။
🆕 ကိုယ့်ရဲ့ Emotionကို Label တပ်ကြည့်ပါ။
🆕 Choice လုပ်ဖို့လိုပါတယ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Beat Up လုပ်နေမလား၊ Action ယူမလား။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆွဲချနေတဲ့ Blaming Cycle ထဲကို မရောက်ဖို့၊ အကြောင်းပြချက်တွေမှာ သာယာမနေဖို့လိုပါတယ်။
————————- Conversation :2—————————————
အလုပ်တွေကများလာနေတယ်၊ မလုပ်ဖြစ်ဘဲ အချိန်ဆွဲနေမိတယ်၊ Blaming Cycle ထဲမှာ ရောက်နေတယ်။
ကိုယ့်အတွက် ဒီအလုပ်ကို လုံးဝ မလုပ်ချင်တော့တာလား၊ မလုပ်တော့ဘူးလား၊ မလုပ်တော့ရင်ရော ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
🆕 Individual Choice နဲ့ နေဖို့ ကြိုးစားပါ။
🆕 အလုပ်လုပ်ရခြင်းရဲ့ context ကို သေချာစဉ်းစားပြီး ကျော်မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
🆕 လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ်တည်ဆောက်ချင်တဲ့ Image ကို အာရုံစိုက်ပါ။
🆕 Motivation ရှိမှ လုပ်တာထက် Alarm မြည်တာနဲ့ စပြီးလုပ်တဲ့ အကျင့်ကို စလုပ်ကြည့်ပါ။
🆕 ကိုယ့်ရဲ့ activity တွေကို track လုပ်ကြည့်ပါ။ Evidence နဲ့ အလုပ်လုပ်တတ်ဖို့ သင်ယူပါ။
Why (ငါဘာလို့ ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲ) မေးခွန်းအစား What (ဒီအခြေအနေမှာ ငါဘာလုပ်လို့ရလဲ) ဆိုတာကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်စေချင်ပါတယ်။
————————- Conversation :3—————————————
ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ ကြုံရတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု နည်းတာ၊ မပြောရဲ မဆိုရဲ ဖြစ်တာတွေ၊ စိတ်တိုလွယ်တာတွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့။
ဒီလိုနေပါ၊ ဒီလိုမျိုးပြောပါ ဆိုတာမျိုးတွေ ပြောမဲ့အစား What is missing? What does she/he really need? ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ မိဘက Fear-Based နဲ့ အုပ်ထားသလိုဖြစ်နေသလား ဆိုတာလဲ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
🆕 ကလေးတွေ လိုချင်တာ၊ ရချင်တာ၊ ခံစားချက်တွေအတွက် မေတ္တာပေးဖို့လိုပါတယ်။ Whatever you do, I Love you….ဆိုတာမျိုးပါ။
🆕 ဘေးကနေ Judgement မလုပ်ဘဲ support လုပ်ပေးပါ။
🆕 အတူတူ activities လေးတွေ လုပ်ကြည့်ပါ။
🆕 Life ကို experience လုပ်ခွင့်ပြုပါ။ သူ့ကိုယ်သူ ရှာဖွေပါစေ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မသိလိုက်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ Conversation တွေ၊ Response တွေကရော “သူကတော့ ဒီလိုပါပဲ” ဆိုပြီး Conditioning လုပ်မိနေလား ဆိုတာလည်း သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။
————————- Conversation :4—————————-
အသစ်တွေ သင်ယူနေပေမယ့်လည်း ရောက်သင့်သလောက် မရောက်ဘူး၊ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်မလာဘူး လို့ခံစားနေရတယ်။
သစ်ခုတ်သမား သစ်ပင်ပဲခုတ်နေသလို ဖြစ်နေလား၊ ပုဆိန်ပဲ ထိုင်သွေးနေသလိုဖြစ်နေလား စဉ်းစားကြည့်ပါ။
🆕 Learning goals တွေ သတ်မှတ်ပြီး လိုအပ်သလောက် လေ့လာပြီး လက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါ။
🆕 လုပ်ကြည့်ရင်း ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ လိုအပ်တာတွေကို ထပ်ဖြည့်တာမျိုးဆိုရင် ပိုပြီးထိရောက်နိုင်ပါတယ်။
သင်ယူနေတာက ကောင်းပေမယ့် အသစ်လေး သင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကို သဘောကျ
နေတာ၊ စွဲနေတာမျိုး ဖြစ်နေသလားလည်း စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
————————- Conversation :5—————————-
Issues to Solve 🎯ဖြေရှင်းဖို့လိုနေတာ၊ တိုးတက်ချင်တဲ့နေရာ
🎯Behavior Change Model ရဲ့ အဆင့်တွေ – မသိ > သိလာ > လက်ခံ > စမ်းလုပ်ကြည့် > စွဲမြဲ > စည်းရုံးလုပ်ဆောင်
🎯တစ်ခုခုကို စမ်းလုပ်ကြည့်တဲ့ အဆင့်ကနေ၊ လက်တွေ့ အလေ့အကျင့် ဖြစ်မလာဘဲ အစကို ပြန်ရောက်ပြီး သံသရာလည်နေတယ်။
အတင်းချူပ်တည်းထားပြီး ကိုယ်တကယ် မကြိုက်ဘဲ၊ လိုချင်တာမဟုတ်ဘဲ လုပ်မိနေသလား။ ကိုယ်ရှိနေတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပြောင်းချင်တဲ့ Behavior ကရော အဆင်ပြေမလား၊ ပြောင်းဖို့လိုမလား။
🆕 အရင်က ကိုယ်အောင်အောင်မြင်မြင် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ အကျင့်တစ်ခုအကြောင်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘာတွေက အထောက်အကူ ပြုခဲ့သလဲ၊ အဆင်ပြေခဲ့လဲ။
🆕 Habit ဖြစ်ဖို့ လိုတာလေးတွေ –
• Environment (ရှင်သန်ရတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကောင်း)
• Encouragement (အားပေးမှု)
• Product & Services (ကိုယ်နဲ့ လက်လှမ်းမီတဲ့၊ တတ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု)
• Belief in yourself & Outcome (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နဲ့ ရလဒ်အပေါ် ယုံကြည်မှု)
• Feeling & Experience (ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ)
• Record the progress (ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာတွေကို မှတ်တမ်းထင်ထားဖို့)
• Know which are support to you (ကိုယ့်ကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကို သိဖို့လို)
ကိုယ်နိုင်သလောက်ပဲ စလုပ်ပါ။ သေချာပေါက် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးများတဲ့ အကျင့် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူ လက်မလျော့လိုက်ဘဲ တဖြည်းဖြည်းချင်း စပြီး လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
————————- Conversation :6—————————-
အနာဂတ်က မသေချာဘူး၊ အိမ်အလုပ်ပဲ လုပ်ရမလား၊ ကိုယ့်ရဲ့ Passion နောက်ကို လိုက်ရမလား။
ကျောင်းမှာသင်ခဲ့တာကိုပဲ ဆက်လုပ်မလား၊ ပြောင်းလဲလိုက်မလား။ ပြတ်ပြတ်သားသား ရွေးချယ်ဖို့ ပါတယ်။
🆕 လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ချက်ချင်းကြီး ရွေးချယ်မဲ့အစား ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ ဝါသနာတွေ၊ Hidden Box တွေကို ရှာဖွေကြည့်စေချင်ပါတယ်။
🆕 ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မသိသေးတာတွေလည်း ရှိနိုင်သေးတာမို့ Exposure (အထိအတွေ့) တွေရှာကြည့်ပါ။ စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ။
🚫 အနာဂတ်ကိုပဲ တွေးပူနေတာ၊ မသေချာတာတွေကနေ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာ လုပ်လို့ရတာလေးတွေ လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
🚫 ထိုင်ပြီး စိတ်ညစ်နေ၊ငြိမ်နေမယ့်အစား တစ်ခုခုကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ passion ကလုပ်ကြည့်ရင်းကလည် ပေါ်လာတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
————————- Conversation :7—————————-
Emotional Intelligence ကောင်းပြီး Empathy မြင့်တဲ့၊ ပျော်ရွှင်တဲ့ workplace ဖြစ်ဖို့။
🆕 ကိုယ်တိုင် ရှေ့ကနေလုပ်ပြတာ
🆕 Mindfulness session လေးတွေ၊ တရားထိုင်တာတွေ အတူတူ လုပ်ကြတာ
🆕 မတူတဲ့ ဘဝတွေကို ပိုနားလည်ဖို့ ရုံးမှာ အတူတူ ရသစာပေဖတ်ကြတာ၊ ရုပ်ရှင်အတူတူကြည့်တာ
————————- Conversation : 8 —————————-
Acknowledgement ကိုဘယ်လိုလက်ခံရမလဲ၊ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဘယ်လိုမျိုး တုန့်ပြန်ရမလဲ။
လက်ခံလိုက်ပြီးရင် သူများက ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာကို ဂရုစိုက်မိ နေတာမျိုး ဖြစ်နေသလား စဉ်းစားကြည့်ပါ။
🆕 လက်ခံတဲ့အခါ အရမ်းကြီး serious မဖြစ်ဘဲနဲ့ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဆိုတာကိုပဲ သေချာလေးပြန်ပြောပေးပါ။
🆕 ကိုယ်က ချီးမွန်းလိုက်လို့ သူ့ဘက်က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တုန့်ပြန်တဲ့အခါ ကိုယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲ တွေးကြည့်ပါ။
🆕 တစ်ဖက်က ပေးလာတဲ့ အသိအမှတ်ပြုတာကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ grateful ဖြစ်ဖြစ် ယူလိုက်တာမျိုးသည် ပေးတဲ့သူကို appreciate လုပ်တဲ့ သဘောလည်းဖြစ်လို့ နှစ်ဦးလုံး အကျိုးရှိတာကိုလည်း တွေးစေချင်ပါတယ်။
သူများက ကိုယ့်ကိုကောင်းတယ် လို့ပြောတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Little Voice ကနေ အဲ့လောက်တော်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါညံ့တဲ့နေရာတွေ အများကြီးပါပဲ။ စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ သိမ်ငယ်စိတ်ကလည်း ရှိနေတတ်တာကို အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့လိုပါတယ်။
————————- Conversation : 9—————————-
Negative Emotion တွေများနေတယ် ထင်တယ်။
TFAR – Thought >Feeling > Action >Results
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Discover လုပ်ကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုအတွေးတွေ တွေးလို့ ဒီလို feeling တွေ ဖြစ်လာတာလဲ။
ဘယ်လိုကြောင့် ဖြစ်တာလဲ။ အဲ့ဒီအတွေးက ဘယ်ကနေလာတာလဲ။
🆕 စိတ်တိုတယ် ဝမ်းနည်းတယ်စတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို သွားပြီးတွန်းမထုတ်ပါနဲ့ Be With It, ဖြစ်တာကို သိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
🆕 အရမ်းကြီး significant လုပ်ပြီး serious မဖြစ်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ “ဟုတ်တယ် လူသားပဲမို့ စိတ်ပုတ်တတ်တယ်။ မနာလိုတတ်တယ်” အဲ့လိုမျိူးလေးပဲ လက်ခံလိုက်ပါ။
🆕 နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ဆိုရင် ဒီစိတ်လေးက ဘာကြောင့်ရှိနေတာလဲ ဆိုတာကိုပါ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
သူများကို Negativity နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်ထားဖူးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆိုရင် ပိုပြီး Beat Up လုပ်တတ်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်က Negative တွေများနေတယ်ဆိုတဲ့ Identity ကို ခံယူမိနေတာလား။
————————- Conversation : 10 —————————-
Listening ( နားထောင်ခြင်း)
Listening ( နားထောင်ခြင်း) မှာ Filter တွေ အများကြီးရှိတတ်ပါတယ်။ကိစ္စတစ်ခုကို ကြားလိုက်တာ၊ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာသည် တခြားသူနဲ့ မတူနိုင်ဘူးဆိုတာကို သတိပြုစေချင်ပါတယ်။တခြားသူကို ကိုယ်မြင်သလို မြင်ရမယ်၊ ငါပဲမှန်တယ် လုပ်လို့မရပါဘူး။ Filter တွေကြောင့် “Already Always Listening” နားမထောင်ရသေးခင် ကြိုပြီး Judge လုပ်တာ၊ သိပြီးသားပါ၊ ဒီလူနဲ့ ပါတ်သတ်ရင် ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ ….ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ပိုပြီး ထိရောက်မှု ရှိစေဖို့-
သူဘာတွေပြောနေတာလဲ။ Word by Word လုံးစေ့ ပတ်စေ့ကို နားထောင်ဖို့ကြိုးစားပါ၊ဘာပြန်ပြောမလဲ စဉ်းစားတာ၊မှန်လား မှားလား ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေ မလုပ်ဘဲနဲ့ သေချာနားထောင်ပြီး Notes ၊ Chat စတာတွေနဲ့ မှတ်ထားတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်။
သူပြောတာကို ပြန်ပြောတာ၊ reconfirm လုပ်တာပါ။ လွဲသွားတာတွေကို ပြင်လို့ရသလို၊ ထပ်ဖြည့်ချင်တာတွေအတွက် Opportunities လည်းရလို့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပိုရနိုင်ပါတယ်။
————————- Conversation : 11 —————————-
“Professionalism” ဆိုတာကိုယ်နဲ့ ပါတ်သတ်ဆက်စပ် တွဲဖက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေကို စိတ်ချမ်းသာစေတာ။
3 Keywords foraSuccessful Career
Talent (Born to be ဖြစ်ဖို့မွေးဖွားလာတာ)
Professional ဆန်ဆန် အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တာတွေ-
Skills (Technical Standard)
Self-control (Ethical Standard)
1 –2–3Action!!
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာ Action ဆိုတာနဲ့ စပြီး သရုပ်ဆောင်ရသလိုမျိုးပဲ ကိုယ်ရဲ့အလုပ်ကိုလည်း အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
Professional တွေအတွက် ဆိုရင်
No Excuse ( အကြောင်းပြချက် မပေးပါနဲ့)။ အကယ်၍ အဆင်မပြေခဲ့ရင်လည်း တောင်းပန်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
Technical and Ethical Standard ရှိဖို့လို။
အဆိုးကိုပါ လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားထားဖို့လိုပါတယ်။
————————- Conversation : 12 —————————-
ဦးစားပေးလုပ်ရမဲ့အရာတွေ၊ အချိန်ပေးပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံရမဲ့ အရာတွေအတွက် စဉ်းစားတဲ့ပုံစံ
Business – 80% သော လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက် 20% သော အမာခံ customer တွေကို ဦးစားပေးတာ။
Performance – လုပ်ငန်းခွင်မှာ performance 80% တိုးတက်လာဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ 20% ကို ဖြည့်လိုက်တာ။
Learning/ Personal Development – ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်မှုအတွက် ပြန်အသုံးချလို့ရတဲ့ နယ်ပယ်ထဲက အရာတွေကို ဦးစားပေးလေ့လာတာ။
Social/Relationship – ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသော Relationship တွေဆီကနေ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေ၊ ပိုက်ဆံတွေ၊ အင်အားတွေကို ဘယ်အုပ်စုမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမလဲ ရွေးဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့သူတွေကို အချိန်ပေးနေလား။
Organizational Development – လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဦးစားပေးရမဲ့ အရာတွေ။
အပေါ်က area (၅)ခုမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် self-reflection လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘဝရဲ့80% ကိုပြောင်းလဲသွားစေမဲ့ 20% သော လုပ်ဆောင်စရာသည် ဘာဖြစ်မလဲ။ (၃)ချက်လောက် စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Goal အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကိုယ်ချမှတ်ထားတဲ့ goals တွေထဲက တစ်ခုချင်းစီကို လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ဘဝမှာ 80% သော အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားစေနိုင်သလား၊ အရေးကြီးဆုံး တစ်ခုကို ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်။
————————- Conversation : 13 —————————-
Are you doing something on the court?
ကိုယ့်ရဲ့ Life issue တွေကို တကယ်ပဲ on the court အလုပ်လုပ်ဖြစ်နေလား?
စက္ကူခွက်နဲ့ ဖန်ခွက်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အသုံးဝင်ပုံခြင်း အတူတူပါပဲ။ မီးရှို့တဲ့ အခါမှာတော့ စက္ကူခွက်ကို အရင်လောင်တာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝက အကြောင်းအရာတွေကို ခွက်ထဲကိုထည့်တဲ့ content လို့ သဘောထားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အခြေခံ စိတ်နေစိတ်ထား ၊ အခြေခံသဘောထားကို context လို့မြင်ကြည့်ပါ။
ကိုယ်က စက္ကူခွက်လား ? ဖန်ခွက်လား?
ကြောက်စိတ်ကို အခြေခံနေသလား?ကောင်းတဲ့စိတ်ကို အခြေခံသလား? ဘာအတွက်လုပ်တာလဲ? ….
ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခြင်းစီမှာ ကိုယ့်ရဲ့ context က မှန်မှန်ကန်ကန်ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။
On The Court? In The Stand?
ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို ဖြတ်သန်းတဲ့ အခါ_
ဘောလုံးကွင်းမှာ ဝင်ကန်နေသလို (on the court) လား?
အပြင်ဘေးတန်း ပွဲကြည့်စင်ကနေ ထိုင်ကြည့်တဲ့ (in the stand) လား?
On the court လုပ်တဲ့ အခါ ရှုံးနိုင် မြတ်နိုင်၊ ကိုယ်ပင်ပန်းနိုင်ပါတယ်။
ပွဲကြည့်စင်ကနေ ထိုင်ပြီး ပြောရတာကတော့ လွယ်ပါတယ်။
ပွဲကြည့်စင်မှာ နေနေသရွေ့တော့ result လည်းမရပါဘူး။
အဆုံးအဖြတ်ကတော့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရတဲ့ on the court မှာပဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။